Naqshadeynta sawirka, naqshadaha warshadaha iyo baakadaha | Abuurista khadka tooska ah
Naqshadeynta sawirka, naqshadaha warshadaha iyo baakadaha
Naqshadeynta baakadaha waxay xiriir dhow la leedahay aagga ficilka laba muuqaal oo kala duwan: Naqshadeeyaha garaafka iyo nashqadeeyaha warshadaha. Anshaxaani waxaa lagu aasaasay meel isku mid ah oo udhaxeeya labada laamood ee nashqadeynta wuxuuna ku midoobayaa midka kale. Tusaale ahaan, shaxanka naqshadeeyaha garaafka ayaa mas'uul ka ah xalinta dhibaatooyinka ama xaaladaha la xiriira farriinta iyo hadalka muuqaalka ah iyo sidoo kale macluumaadka noocaan ah ee lagu daadiyay warbaahinta kala duwan. Si kastaba ha noqotee, jaantuska naqshadeeyaha warshadaha waxaa lagu gartaa inuu yahay jaantus xirfadlayaal ah ujeeddadiisuna tahay inay horumariso, abuurto oo hirgeliso mashaariic loogu talagalay isticmaalka badan, isticmaalka warshadaha ama taxanaha.
Waa sidaas waxaa jira arrimo badan oo saameyn ku leh mashruuc baako wax ku ool ah. Qeybta garaafka iyo rasmiga ah ee xirmada iyo waliba astaamaheeda dhameystiran waxay leeyihiin saameyn weyn oo inta badan go'aamisa guusha ama guuldarada iibka sheyga ee ka dambeeya dhamaan hadalka la soo saaray. Laakiin ma iska indho tiri karno muhiimada uu leeyahay naqshadeeyaha warshadaha ee dhismaha qoraalkayaga muuqaalka ah maadaama uu isagu mas'uul ka noqon doono abuurista walxaha loogu talagalay qaybinta iyo ganacsiga laakiin sidoo kale xallinta dhammaan noocyada dhibaatooyinka shaqada (taas oo sidoo kale caqabad ku ah hadalka naqshadeeyaha garaafka) iyada oo loo marayo adeegsiga agabyada ku habboon iyo la qabsashada tikniyoolajiyadaha ugu dambeeyay iyo isbeddellada. Waxaan dhihi karnaa markaa awoodiisa sida wakiilka hal-abuurka ee geeddi-socodka wuxuu diiradda saarayaa hagaajinta wax soo saarka warshadaha iyada oo loo marayo naqshadeynta lafteeda. Naqshadeeyaha warshadaha wuxuu leeyahay awooda iyo khibrada lagama maarmaanka u ah dhisida, qaabeynta iyo maamulida aagaga kaladuwan ee naqshadeynta wuxuuna udhaxeeyaa sameynta baakadka waxsoosaarka ilaa nashqadeynta dhamaan noocyada alaabta guriga.
Xaaladaha baakadka waxaan ku kala saari karnaa laba aag oo si fiican loo kala soocay:
Naqshadeynta naqshadeynta wax kasta oo la xiriira luqadda muuqaalka iyo isgaarsiinta sumadda. Halkan waxaan ka hadleynaa qaab gaar ah oo naqshadeynta astaanta ah (astaanta shirkadda iyo cusboonaysiinta xigta), horumarinta buugga ama palette midabka shirkadaha (iyo sidoo kale horumarinta shuruucda aqoonsiga shirkadaha ee ku qoran buug-gacmeedka), qaabka garaafka oo ay tahay in loo isticmaalo loona isticmaalo astaanta su'aasha ku jirta iyo nooc kale oo ballaadhan. Waxaan ku dhihi karnaa khadadka guud ee ah in naqshadeeyaha garaafku uu halkaan isku dayo inuu isku daro shaqeynta iyo shucuurta, sidaa darteed qeybta cilmu-nafsiga ayaa sidoo kale xiriir dhow la leh horumarka shaqadiisa. Midabbada, qaababka iyo qaababka muuqaalka ah waxay sidoo kale saameyn cad ku leeyihiin aragtida iyo u fiirsashada isticmaaleha (iyo macaamilka suurtagalka ah), waana sababta ay sidoo kale xiriir dhow ula leedahay waaxda suuqgeynta. Naqshadeeyaha garaafku waa inuu tixgeliyaa dhowr arrimood oo taxane ah (nooca badeecada, shirkadda, macaamiisha iyo dhagaystayaasha raaca nooc gaar ah, qaab rasmi ah, qaab dhismeed, shucuur iyo cilmi nafsi) si loogu beddelo hadal xoog leh sawirro. Waxay mas'uul ka tahay naqshadeynta macluumaadka in la helo maaddaama weelka uu kashifayo macluumaad fara badan oo ku saabsan waxyaabaha ka kooban shey gaar ah: maaddooyinka iyo astaamaha, asalka, waxtarka, xaddidaadda, taxaddarrada ama tilmaamaha isticmaalka.
Naqshadeynta warshadaha Waxay ka kooban tahay ficillo taxane ah oo go'aamiya qaabdhismeedka weel, dabcan iyada oo la tixgelinayo arrimo ay ka mid yihiin nooca badeecada la soo raacayo, qaabkeeda, cabirkeeda ama qaabkeeda, iyo sidoo kale culeyskiisa iyo cufnaantiisa. Jilicsanaanta ama iska caabinta badeecadda uu weelku dabooli doono sidoo kale waa mid muhiimad gaar ah leh, sidaa darteed waa inaad mas'uul ka tahay sameynta iyo qaabeynta weel bixiya xaaladaha ugu habboon ee lagu ilaalin karo loona ilaalin karo mid kasta oo canaasiirta ka mid ah. Marka la eego, waa inaad sidoo kale waxoogaa aqoon ah ka haysataa waxyaabaha la isticmaalayo iyo meesha ay ku jiri doonto alaabtu, maadaama arrimaha dibedda iyo deegaanka sida cadaadiska, heerkulka iyo huurka ay saameyn ku yeelan karaan badeecada iyo weelka laftiisa. Waxaas oo dhan waa inaan ku darnaa khataraha suurtagalka ah ee ka jiri kara qaybinta iyo dabcan dabeecadda wax ku oolka ah ee shaqeyneysa ee laga soo daabuli karo naqshadaynta weelka, wax aad ugu baahan tahay taageero ama is-afgarad dhinaca naqshadeeye muuqaal ah iyo waaxyo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Naqshadeynta sawirka, naqshadaha warshadaha iyo baakadaha
Sawirro Kirismas ah oo Bilaash ah